I-Semalt: Indlela Yokuvimbela Ukudluliswa Kwama-Darodar Ghost Kusayithi Lakho
Uma ngezikhathi ezithile uhamba nge-Google Analytics yakho, uzothola ezinye zokudlulisa izimoto ezivelele. Ukuthi baqhubeka bevuna imibiko yomgwaqo kubonisa ukuthi othile uthumela ezinye izimoto kusayithi. Noma kunjalo, akubona bonke abathumeleli abamele abantu bangempela. Kukhona lezo okudingayo ukuzivimba kusuka kusayithi lakho.
Isihloko esilandelayo, esihlinzekwa ngu-Oliver King, isazi esiphezulu esivela ku Semalt , sihlanganisa inqubo esusa abathungi abangadingeki. Kulesi simo, uDarodar ungummeli wokukhwabanisa, kodwa indlela ibuye isebenze nakwabanye abathintekayo abangafuneki.
Ngiqaphele umsebenzi ongavamile ovela kumuntu othumelela ngegama elithi Darodar. Isizinda se-referrer saqhubeka nokuvela emagodini ami okwangenza ngivakashele isayithi futhi ngibone ukuthi babekuphi. Ulwazi engilutholile lapho lubonise ukuthi ithuluzi elilula le-SEO. Ngacabanga ukuthi kwakuyi-crawler ejwayelekile yesayithi ukuqoqa ulwazi oluvela kusayithi lami bese ngikuvumela ukuba lihlelwe. Ngemva kokuhlanganyela namanye amalungu eqembu le-inthanethi esihlokweni seDarodar, kwangibona ukuthi le nkinga yayibaluleke kakhulu kunalokho engangikucabanga.
I-Darodar yaziwa ngomkhuba wayo odumile wokuthumela i-spam yokudlulisela phambili kubanikazi bewebhu abaningi. Kuthiwa kusakazeka ugaxekile ngokusebenzisa i-malware esakazwa nge-botnet. Ngisho noma kungenzeka ukuthi awuzange ube yisisulu sokuhlaselwa okunjalo, kuhle ukuba uthathe izinyathelo zokuvimbela kusuka kusayithi lakho lo mthumeli okhohlisayo..
Ukuvimbela iDarodar ekufinyeleleni isayithi lakho
Isinyathelo sokuqala sokuthatha ukuvimba zonke izizinda ezisolisayo ngefayela le-.htaccess. Yonke isayithi esebenzisa i-WordPress ineli fayela kusiqondisi sempande yewebsite. Ungathola amakhodi angayisebenzisa kusuka kuPaul Thompson kusuka ku-Buzzwords kuya eBhizinisini. Uma unayo ikhodi, vula ifayela lakho le-.htaccess bese ulinamathisela phansi. Londoloza idatha entsha. Kuzoqinisekisa ukuthi isayithi lakho aliveli ngaphansi kokuhlaselwa ezizindeni ezibalwe futhi ezisetshenziselwa abadlulisela phambili kusukela ngaleso sikhathi. Kubalulekile ukuqaphela ukuthi abakhohlisi abakhohlisi banezizinda eziningi ezilahlwa futhi bangashintsha nganoma isiphi isikhathi. Ngakho-ke, ngaso sonke isikhathi qapha futhi uqhubeke nokubuyekeza ifayela le-.htaccess.
Isinyathelo esilandelayo ukuqinisekisa ukuthi ususa yonke imininingwano kaDarodar kusuka ku-Google Analytics. Kubalulekile ukwenza lokhu njengoba kuqinisekisa ukunemba kwe-analytics kanye nemibiko ye-GA. Amathuba wukuthi amazinga wokunciphisa kusukela ekuvakasheni okuningi okuvela eDarodar analo lonke ulwazi oluthathwa. Ukususa ama-referrers asebenzisa amacebo afanayo njengebhodi le-Darodar ukuqinisekisa ukuthi ukulandelela kwakho kwe-e-commerce nokuqapha ku-Google Analytics akuzicabangeli esikhathini esizayo. Akukhathaleki ukuthi ngabe ukuhlukumeza kubalulekile yini noma cha, ngaphansi kwezimo ezingafanele uma umuntu ebeka izinqumo zakhe ezibalweni ezingalungile noma ezingalungile.
Okuthunyelwe kwamanje kuchaza ngokuyinhloko izindlela ezisetshenziselwa ukuvimbela iDarodar kusayithi lakho. Izindaba ezinhle ukuthi indlela isebenza kunoma yikuphi okuthungayo okungafuneki ofuna ukukuvimba kusuka kusayithi lakho. Lezi zibili zizosiza ekuvimbeleni ukukhipha izibalo zakho esikhathini esizayo.